दिउँसो सुत्ने बानी छ भने सावधान ! निम्तिन्छ यस्ता घातक समस्याहरु – Online Khabar 24
दिउँसो सुत्ने बानी छ भने सावधान ! निम्तिन्छ यस्ता घातक समस्याहरु
काठमाडौँ : प्रायः व्यक्तिको दिउसो सुत्ने बानी हुने गर्दछ । त्यसैले मानिस दिउसो फ्री भएको समय सुतिदिहाल्छन् ।
तर दिसोको समय सुत्नु फाईदा हुँदैन । धेरै बेफाईदा छ दिउसो सुत्नुमा । बिएमआई (बडी मास इन्डेक्स) ३७ भन्दा धेरै हुँदा लिभर क्या’न्सरको ख’तरा २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन जान्छ ।
दिउँसोको समयमा एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा टाइप टु डाय’बिटिजको ख’तरा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ ।
युनिभर्सिटी अफ टोक्योका अनुसन्धानकर्ताले हालसालै तीन लाख व्यक्तिमा गरेको अध्ययनले दिउँसो एक घन्टाभन्दा बढी सुत्दा धेरै नो’क्सान हुने चेता’वनी दिएको छ ।
यसले मु’टुसम्बन्धी रो’ग, ब्रेन स्ट्रोक र डा’यबिटिजको ख’रा बढ्छ ।दिनभरि सुत्दा रातमा निद्रा लाग्दैन । रातमा निद्रा पूरा नहुँदा भोक धेरै लाग्छ र यसले ब्लडसु’गरको स्तर असामान्य गराइदिन्छ । डा’यबि’टिज वा मोटो’पनका कारण लिभर क्या’न्सरको ख’तरा रहन्छ । डाय’बिटिज टाइप टु रो’गीको अत्यधिक तौल लि’भर क्या’न्सरका कारण बन्न सक्छ ।
सामान्यतः महिलाको कम्मरको मोटाइ ३० र पुरुषको ३४ इन्चभन्दा माथि हुनुहुँदैन । अमेरिकन क्या’न्सर सोसाइटीको एक अध्ययनले कम्मरको मो’टाइ आवश्यकभन्दा ५ सेन्टिमिटर बढे पनि क्या’न्सरको आशंका ७ प्रतिशतले बढ्न जान्छ । साभार गरियको खबर यस्तै यो पनि पढनुस,काठमाडौँ: महिलाहरु चाहन्छन् आफुले संगत गर्ने पुरुष संस्का’री र सहयोगी होस् ।
नम्र एवं सहयोगी : घमण्डी तथा रिसाहा पुरुष महिलाहरुलाई मन पर्दैन । गम्भि’र, न’म्र र शान्त स्वभावका पुरुषहरु धेरै महि लाहरुले रुचाउँछन् । गफिएर बस्ने, हल्ला गर्ने एवं ठट्टा गर्ने पुरुषहरुलाई महिलाहरुले क्षणिक रुपमा मन पराए पनि लामो समय मन पराउदैनन् । साभार गरियको खबर ।
Prevमहिलालाई प्रभाव पार्न पुरुषमा हुनु पर्छ यस्ता गुण !
nextयस्तो छ भोलिको दशैंको टिकाको सुभ साईत हेर्नुहोस् !